पुत्र वियोगमा प्रचण्ड: ३६ वर्षीय छोरालाई ६३ वर्षीय बाबुले दिए दागबत्ती - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
पुत्र वियोगमा प्रचण्ड: ३६ वर्षीय छोरालाई ६३ वर्षीय बाबुले दिए दागबत्ती
मंसिर ४ गते, २०७४ - ०७:३०
काठमाडाैं । प्रचण्डपुत्र तथा माओवादीका युवा नेता प्रकाश दाहालको आइतबार साँझ ५ बजे पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ । ३६ वर्षीय प्रकाशको पार्थिव शरीरलाई ६३ वर्षीय बाबु प्रचण्डले दागबत्ती दिए । छोरालाई दागबत्ती दिँदा प्रचण्डको आँखा आँसुले भरिएका थिए । यसअघि अस्पतालमा छोराको पार्थिव शरीरलाई पहिलोपटक देख्दा, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा श्रद्धाञ्जली दिँदा पनि प्रचण्डले आपूmलाई सम्हाल्ने कोसिस गरेका थिए । तर, आँसु थाम्ने प्रयासमा उनी हरेकपटक असफल थिए । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-दुःखको घडीमा साथ दिन आएका हजारौँ शुभचिन्तकलाई प्रचण्डले आँसु चुहाउँदै दुई हात उठाएर अभिवादन गरे ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका छोरा प्रकाश दाहालको आइतबार हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको छ । केही दिनदेखि ज्वरो र रुघाखोकीले ग्रस्त उनी शनिबार राति जाउलो खाएर सुतेका थिए । बिहान सबेरै उठ्ने छोरा नउठेपछि आमा सीता दाहाल उनको कोठामा पुग्दा प्रकाश अचेत अवस्थामा थिए । बिहान ५ः५० बजे दुई सहयोगीले उनलाई नर्भिक अस्पताल पु¥याए । अचेत अवस्थामा रहेका दाहाललाई तुरुन्तै इसिजी गरियो । इसिजीमा कुनै चाल नदेखिएपछि ५ः५९ बजे चिकित्सकले प्रकाशलाई मृत घोषणा गरेका थिए ।
‘उहाँ (प्रकाश दाहाल) लाई अस्पतालमा ल्याइपु¥याउँदा अनुहारमा कुनै ‘रियाक्सन’ थिएन, साथै इसिजी गर्दा पनि मुटुको धड्कन पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो,’ डा. जेपी जैसवालले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘बिहान ५.५० बजे अस्पताल पु¥याउँदा उनको हातगोडा चिसो र शरीर कडा भएको थियो । आँखा सुन्निएको थियो । मृत शरीर हेर्दा अस्पताल ल्याउनु तीन घन्टाअघि नै मृत्यु भएको हुन सक्छ ।’
प्रकाशको ९९ प्रतिशत आकस्मिक हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको जैसवालले बताए । ‘आकस्मिक हृदयाघात भएको एक घन्टाभित्र अस्पताल पु¥याउन सके पूर्ण रूपमा उपचार गर्न सकिन्छ । एक घन्टासम्म मुटुको मांशपेसी बाँच्ने हुन्छ,’ उनले भने । डा. जैसवालले प्रकाशको शरीरमा ब्लडप्रेसर र सुगर कुनै नदेखिएको पुष्टि गरे ।
झापाबाट प्रचण्ड आएपछि १ बजे औपचारिक रूपमा मृत घोषणा
चुनावी कार्यक्रमको सिलसिलामा झापा पुगेका प्रचण्ड आएपछि मात्र दिउँसो १ बजे औपचारिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रकाशलाई मृत घोषणा गरिएको थियो । झापामा रहेका बाबु प्रचण्ड, चितवन रहेकी दिदी रेणु र कञ्चनपुरबाट श्रीमती विना भावविह्वल हुँदै अस्पताल आइपुगेका थिए । अस्पतालले औपचारिक रूपमा मृत घोषणा गरेपछि उनको पार्थीव शरीरलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडा लगिएको थियो । पार्टी कार्यालयमा साढे १ देखि ४ बजेसम्म अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको थियो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ताले प्रकाशको पार्थिव शरीरमा पुष्पगुच्छा चढाएर श्रद्धाञ्जली दिएका थिए ।
यस्तो थियो प्रकाशको राजनीतिक जीवन
प्रकाश दाहालको जन्म १७ असार ०३८ चितवनको शिवनगरमा भएको हो । प्रचण्ड र सीताका चार सन्तानमध्ये जेठी छोरी ज्ञानुको चार वर्षअघि क्यान्सरका कारण मृत्यु भएको थियो । प्रकाशका दुई छोरा छन् । १२ कक्षासम्म अध्ययन गरेका उनी पढ्दापढ्दै माओवादी सशस्त्र संघर्षमा होमिएका थिए । ०५७ देखि पार्टीको पूर्णकालीन सदस्य भएका उनले जनयुद्धकालदेखि प्रचण्डको सचिवालयमा रहेर काम सुरु गरेका थिए । उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव थिए ।
वाम गठबन्धनले चुनावी प्रचार–प्रसार नरोक्ने
एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रकाश दाहालको निधनको शोकमा चुनावी प्रचार र तयारीका बाँकी कार्यक्रम स्थगित नगर्ने भएका छन् । दुवै दलले वाम गठबन्धनको चुनावी प्रचार–प्रसार निरन्तर जारी रहने स्पष्ट पारेका हुन् । यद्यपि, माओवादी केन्द्रले भने शोकमा काठमाडौंसहित धेरै जिल्लाका चुनावी प्रचार–प्रसारका कार्यक्रम आइतबार एक दिनका लागि स्थगित गरेको थियो । कतिपय नेता चुनावी कार्यक्रम स्थगित गरेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समवेदना दिन काठमाडौं आएका थिए ।
प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र चितवन–३ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार विक्रम पाण्डेले शोक व्यक्त गर्दै आइतबारको चुनावी प्रचारको कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए । त्यस्तै, एमालेले प्रकाशको सम्मान र प्रचण्डसहित शोकाकुल परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्न आइतबार २ देखि ३ बजेसम्म चुनावी प्रचारका कार्यक्रम स्थगित गरेको प्रवक्ता विष्णु रिमालले बताए । माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले पार्टी अध्यक्षको निर्देशनअनुसार सोमबारबाट चुनावी प्रचारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताइन् । ‘अध्यक्षको निर्देशनअनुसार सोमबारबाट चुनावी तयारीका सबै कार्यक्रम जारी रहन्छ,’ भुसालले भनिन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं मेरा मित्र प्रचण्डजीका पुत्र प्रकाश दाहालको अल्पायुमा भएको निधनले मलाई र मेरो पार्टी कांग्रेसलाई मर्माहत बनाएको छ । दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै परिवारजनप्रति समवेदना ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पुत्र प्रकाशको असामयिक निधनले मर्माहत बनाएको छ । प्रकाशप्रति श्रद्धाञ्जली । परिवारजनमा समवेदना ।
– केपी ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सीता दाहालका सुपुत्र प्रकाश दाहालको अल्पायुमै
आकस्मिक निधनले स्तब्ध
र मर्माहत भएको छु ।
– डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री
नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सुपुत्र प्रकाशको निधनको खबरले हामी दुःखी
छौँ । शोकाकुल परिवारप्रति हार्दिक समवेदना छ ।
– सुष्मा स्वराज भारतीय विदेशमन्त्री
मंसिर ४ गते, २०७४ - ०७:३० मा प्रकाशित